Xiisad ka taagan Degmo ka tirsan Gobolka Nugaal | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Xiisad ka taagan Degmo ka tirsan Gobolka Nugaal
Xiisad ka taagan Degmo ka tirsan Gobolka Nugaal
Wararka aan ka heleyno degmada Godobjiraan ee Gobolka Nugaal ee Maamulka Puntland ayaa waxaa ay sheegayaan in saakay halkaas ka taagan tahay xiisad u dhexeeysa Maleeshiyaad hubeysan iyo Ciidanka Puntland.
Xiisadan taagan ayaa ka dhalatay Maamulka KMG ah oo dhawaan Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni u magacaabay degmada Godobjiraan ee ka tirsan Gobolka Nugaal.
Rag hubeysan oo maleeshiyaad is abaabulay ah ayaa lagu soo warramayaa inay is hor-istaag ku sameeyeen in xilka lagu wareejiyo Guddoomiyaha Godobjiraan, waxaana la sheegay in sidoo kale uu diiday inuu xilka wareejiyo Guddoomiyihii hore ee degmada.
Israsaaseyn aan khasaaro geystan ayaa dhexmartay maleeshiyaadka hubeysan iyo Ciidamo la socday Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland oo Godobjiraan u tegay Munaasabada xil wareejinta, waxaana dadka halkaas ku sugan kamid ah Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Nugaal Xuseen Xaaji Cabdulle.
Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in gudaha degmada laga dareemayo xiisada taagan, isla markaana ay ka cabsi qabaan in uu dhaco dagaal u dhexeeya labada dhinac, mana jiro dadaalo xal raadin ah oo socda.
Previous articleBooliska Jigjiga oo xiray Gabar ka tagtay Magaalada Muqdisho
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Maanta kusii jeeda Kismaayo iyo ujeedkiisa